သက်တန့်ချို: April 2020
ကိုယ့်မျက်စိက အမှန်တရားကို မြင်နေရတာပဲ
ကိုယ့်နားနှစ်ဖက်က အမှန်တရားကို ကြားနေရတာပဲ
ကိုယ့်အသိဉာဏ်နဲ့ အမှန်တရားကို တွေးတတ်တာပဲ
ဘ၀မှာ သေချာတာ ဘာမှမရှိသလို
ကံကောင်းတာပဲ မဟုတ်လား ?
မြင်နေခွင့်ရသေးရင် ကံကောင်းတာပဲ မဟုတ်လား ?
နောင်တ နည်းခဲ့ရင် ကံကောင်းတာပဲ မဟုတ်လား ?
စစ်မှန်ခြင်းတစ်ခုသာ လိုအပ်ပါတယ် ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပြီး ပိတ်လိုက်တဲ့ Closed cases ပေါင်း အခု ဒီစာရေးတဲ့အချိန်ထိ 906,413 ခုရှိတယ် ။
အဲ့ဒီအထဲကမှ ၈၀% ဖြစ်တဲ့ 722,150 ယောက်က Recover ဖြစ်ပြီးဆေရုံဆင်းသွားကြပေမယ့်
၂၀% ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 184,263 ယောက်ကတော့သေဆုံးသွားကြပါတယ် ။
မတင်းတတင်း လုပ်နေတဲ့ ရန်ကုန်ဟာ
မကြာခင် Epic-Center မဖြစ်လာပါစေနဲ့လို့
လမ်းပေါ်စုစု စုစု ထွက်လာတဲ့ လူစုလေးတွေကို ကြည့်ပြီး သက်ပြင်းချရင်းရေးမိပါတယ် ။
တချို့လူတွေက ပြောစရာအပြစ်မရှိအောင် ကောင်းမွန်လွန်းတယ်
တချို့လူတွေက ရှိသမျှ ပိုလျှံနေလောက်အောင်လုံလောက်လွန်းတယ်
ကိုယ့်ရဲ့ အရှိတရားကို သင်ပေးတယ်
ကိုယ့်ရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကို သတိရစေတယ်
ကိုယ့်ရဲ့ အသိဉာဏ်ကို သင်ခန်းစာပေးတယ် ။
တချို့သော မျက်ရည်တွေက ခွန်အားဖြစ်စေပေမယ့်
တချို့သော မျက်ရည်တွေက နာကျင်မှုနဲ့ပင်ပန်းစေပါတယ် ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ အားယူပြန်ထရမယ်မဟုတ်လား "
🌼 ကိုယ့်ကြောင့် သူတစ်ပါးကို မပျက်စီးစေသူ
🌼 ကိုယ့်အမှားကို သိရှိပြုပြင်ပြီးနောက်ထပ်အမှား ထပ်မကျူးလွန်သူ
🌼 လူတော်တစ်ယောက်မဟုတ်ရင်တောင် လူယုတ်မာတစ်ယောက်မဖြစ်အောင်နေထိုင်သူ
🌼 မကောင်းတာကို မကောင်းတာမှန်းသိရှိ ရှောင်ကြဉ်တတ်သူ
🌼 မမြင်ကွယ်ရာမှာ ပျက်စီးခြင်းတရားကို စွန့်လွှတ်တတ်သူ ကိုခေါ်ပါတယ် ။
ကျောချင်းသာ ခိုင်းနေကြစို့ ။
ဒီတစ်ခါ ရိုးရော ရိုးရဲ့လား
တကယ်ပဲ သူတို့ကိုမထိခိုက်သရွေ့တဲ့လား ?
ခေတ်ကိုက အဲ့ဒီလို ။
အပြင်မှာ မိစ္ဆာတွေ ကူးခတ်နေကြပုံများ
ခေတ်သစ်ငရဲကို ပျိုးနေကြသလို ။
ဟုတ်တယ် .. ခေတ်ကိုက
Mask တစ်ခု ၅၀၀ ကျပ်
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို အသက်ဆက်ကြမလဲတဲ့
လူတွေဟာ အို... ဝေးကွာ ။
Stay Home နေနေသူများ ထင်နေတာလေးဖြေကြည့်ပါလား
မြန်မာနိုင်ငံဟာ တခြားနိုင်ငံတွေထက်ယှဉ်ရင် COVID-19 တွေ့ရှိမှုဟာ အလွန်နည်းပါတယ် ။
ဒီလိုနည်းပါးစွာတွေ့ရှိရတဲ့ ရလဒ်အပေါ် သင်ရော ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ ။
အောက်က အဖြေ ၁၀ ခုထဲက ဘာဖြစ်မလဲ ဖြေသွားကြည့်ပါလား ။
၁ ။ ကံကောင်းလွန်းနေလို့ ။
၂ ။ Suspect စစ်တဲ့ တစ်နေ့တာအ‌ရေအတွက်နည်းနေလို့ ။
၃ ။ တကယ်ပဲ ပိုးကူးစက်မှုက နည်းပါးနေလို့ ။
၄ ။ Asymptomatic carrier တွေကို မဖော်ထုတ်နိုင်သေးလို့ ။
၅ ။ မြန်မာပြည်သူအားလုံးစည်းကမ်းလိုက်နာပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်ဖြစ်နေလို့ ။
၆ ။ ထိတွေ့ကူးစက်သူ Q ခံရသူအားလုံးကို မစစ်နိုင်သေးလို့ ။
၇ ။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဦးရေနည်းခဲ့လို့ ။
၈ ။ အစိုးရကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံ နည်းစနစ်မှန်ပြီး တိကျခဲ့လို့ ။
၉ ။ ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီလုပ်ဆောင်ချက်တွေက မှန်ကန်ထိရောက်ခဲ့လို့ ။
၁၀ ။ စစ်နေတဲ့ Criteria လွဲနေလို့ ။
ဒီ (၁၀) ချက်ထဲမှာပါပဲ ကိုယ့်ဘာသာ ထင်နေတဲ့ယူဆချက်လေးတွေရှိရင်ရေးပေးသွားပါဦး ။
Mask တပ်တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ၅.၄.၂၀၂၀ နေ့စွဲနဲ့ MOHS က ထုတ်ပြန်တဲ့ FAQ တွေကိုဖတ်ပြီးပြီလား ?
စာအရှည်ကြီးတွေဆိုတော့ အစအဆုံး တော်တော်များများ မဖတ်ရသေးလောက်ဘူး ။
အောက်မှာ လိုရင်းတိုရှင်းပဲပြန်ရေးထားတယ် ဖတ်ကြည့် ။
၁ ။ COVID က 60-140nm ရှိတဲ့အကောင်ကြီး ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစား ဒါကြောင့် ချောင်းဆိုး ၊ နှာချေရင် droplets တွေက ၃ပေ-၆ပေထိလွင့်နိုင်တယ် ။
၂ ။ လေထဲကနေတဆင့်ကူးစက်ဖို့ Aerosol transmission ဖြစ်ဖို့အတွက် 10 micrometer အောက်ဖြစ်ပြီး လေထက်ပေါ့ဖို့လို့လိုတဲ့အွက် လေထဲလွင့်ကူးဖို့အခြေအနေနည်းတယ်လို့ဆိုတယ် ။
၃ ။ Mask ၃ မျိုးရှိတယ်
က ။ Surgical Mask ( 10 micrometer အထက် droplest တွေကာကွယ်နိင် )
- ခွဲခန်းအပြင် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ကူးတတ်တဲ့ရောဂါကာကွယ်တဲ့နေရာတွေမှာ သုံးတယ် ။
- Surgical Mask ထဲကို ပြင်ပကအမှုန်အမွှားတွေ ၂၅% ဝင်နိုင် ။ ရောဂါပိုးအကောင် ၁၀၀ ရှိရင် ၂၅ ကောင်ပဲဝင်တဲ့သဘော ။
- Surgical Mask တပ်ပြီး ချောင်းဆိုးရင် ကိုယ့်ဆီကအမှုန်အမွှားတွေ အပြင်ကို ၅၀%ရောက်နိုင် ။ ကိုယ့်မှာ အကောင် ၁၀၀ ရှိရင် အကောင် ၅၀ အပြင်ကိုရောက်နိုင်တဲ့သဘော ။
ခ ။ N95 (လေထဲက ရောဂါအမှုန်အမွှားတွေကို ၉၅% ကာကွယ်နိုင်တယ်
- သာမန်ပြည်သူများတပ်ရန်အကြံမပြု ။ High risk ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေသာ တပ်ရမယ် ။
- N95 ထဲကို ပြင်ပအမှုန်အမွှားတွေ ၁% သာဝင်နိုင် ။ ရောဂါပိုးအကောင် ၁၀၀ ရှိရင် ၁ ကောင်ပဲဝင်နိုင်တဲ့သဘော ။
- N95 တပ်ပြီးချောင်းဆိုးရင် ကိုယ့်ဆီကအမှုန်အမွှားတွေအပြင်ကို ၃၀% ရောက်နိုင် ။ ကိုယ့်မှာ ပိုး ၁၀၀ ရှိရင် အကောင် ၃၀ အပြင်ရောက်နိုင်တဲ့သဘော ။
ဂ ။ Cloth Mask ( ချည် ၊ လီနင် သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အဝတ်နှာခေါင်းစည်း ) အမေရိကန် CDC ကတော့ ပိုးမွှားဝင်ရောက်ကာကွယ်ခြင်းနိမ့်ပေမယ့်ပြန်လျှော်ဖွပ်သုံးနိုင်တဲ့အတွက် cloth mask သုံးနိုင်ကြောင်းပြောထားတယ် ။
- Cloth Mask အတွင်းကိုအပြင်က အမှုန်အမွှားတွေ ၃၃% ဝင်နိုင် ။ ရောဂါပိုးအကောင် ၁၀၀ ရှိရင် ၃၃ ကောင်ဝင်နိုင်တဲ့သဘော ။
- Cloth Mask တပ်ပြီးချောင်းဆိုးရင် ကိုယ့်ဆီကအမှုန်အမွှားတွေ အပြင်ကို ၉၀%ရောက်နိုင် ။ ကိုယ့်မှာ ရောဂါပိုး ၁၀၀ ရှိရင်အကောင် ၉၀ အပြင်ရောက်နိုင်တဲ့သဘော ။
အသေးစိတ်အရှည်ကြီးဖတ်ချင်ရင် တော့ MOHS Page မှာသွားဖတ်ပါ ။
ထပ်ပြောပါ့မယ် Physical distancing ခေါ်ခေါ် Social Distancing ခေါ်ခေါ် ၃ ပေခွာတာထက် ၆ ပေခွာကြပါ ။
Droplets က ပိုးရှိသူချောင်းဆိုးရင် ၃ပေကနေ၆ပေအကွာထိရောက်နိုင်ကြောင်း အတိအလင်းဆိုထားပါတယ် ။
Labels: CoronaVirusUpdate, Facebook ပေါ်မှ စာစုများ
Blame လုပ်မှာလား Care လုပ်မှာလား
တစ်ခါတစ်ခါ လူတွေကပြောရတော်တော်ခက်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း Society မှာ ပိုဆိုးတယ် ။
ကိုယ့်ကို ထိခိုက်လာမယ့်အရာကိစ္စမျိုးဆိုရင် အသည်းအသန်ကာကွယ်တတ်ပြီး blame လုပ်တဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတာတွေတွေ့နေရတယ် ။
ဒီ COVID လို့ခေါ်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် Airborne ပုံစံဖြစ်လာလို့လေကနေတဆင့်တောင် အလွယ်တကူ ကူးလာတဲ့သဘောရှိတယ် ။
ဒီအတွက်လည်း CDC ကအခုဆို Mask တပ်ဖို့ပြောပါပြီ ။ ဒီတော့ ပိုခက်သွားတာက source ရှာရတာပါ ။ Contact ရှာမရပဲ ကူးစက်ခံရသူတွေ မြန်မာပြည်မှာတွေ့လာရပြီ ။
ဒီနေရာမှာအဓိကရေးချင်တာက Blaming Culture ကိုပါ ။ ၁၄ ရက် Q လုပ်နေတဲ့သူတွေဟာ တရားခံတွေမဟုတ်သလို မတော်တဆ ကူးစက်ခံနေရသူတွေကလည်းတရားခံမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတော့ ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေကို blame လုပ်တာ ရွံသလိုလိုဆက်ဆံတာ နှိမ်တာတွေဟာ အလွန်ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ် ။
တရားခံအစစ်တွေက ဘယ်သူလဲသိလား ?
- ကိုယ့်မှာ ရောဂါရှိနေမှန်းသိရက်နဲ့ ၁၄ရက် Q မလုပ်ပဲ လုပ်အုပ်ကြား မသိသလို သွားနေသူတွေ
- ကိုယ့်ဟာ Travelling history ရှိသားနဲ့ စစ်မိသည်ဖြစ်စေ မစစ်မိသည်ဖြစ်စေ Q 14 days Home Stay မနေပဲ အပြင်လျှောက်ထွက်နေကြသူတွေ
- ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေမေးတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ history ကို လိမ်ညာဖြေခဲ့သူတွေ
အခြားနိုင်ငံတွေမှာလို history အမှန်မပြောသူတွေကို ဒါဏ်ပေးတဲ့စနစ်လည်း စသင့်နေပါပြီ ။
အခုအချိန်မှာ Q ခံနေရသူတွေရော Confirmed case တွေရောကို စနစ်တကျ Care လုပ်ပြီး စိတ်ဓါတ်ခွန်အားပေးမှအဆင်ပြေပါမယ် ။
နိုင်ငံတကာမှာ ဒီရောဂါကူးစက်ခံရသူအချို့ လူမှုဝန်းကျင်က စွန့်ပယ်နေကြလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့အမှုတွေဖြစ်လာကြပါပြီ ။ ဒါက blaming လုပ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်ပါ ။
အခုအချိန်မှာ COVID-19 ကို အသက်သာဆုံးကြုံနေရတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ Q လုပ်နေသူတွေနဲ့ မတော်တဆ contact ရှိသူတွေ Confirmed လူနာတွေကို Victim တွေလိုသဘောမထားပဲ လူကိုလူလို့ပဲမြင်ကြပါ ။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒီအခြေအနေအရဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ရော ကျွန်တော်တို့ရောတစ်ချိန်ချိန်မှာ Q ခံရသူ ဖြစ်နိုင်သလို contact မိသူတွေ confirmed ဖြစ်သူတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် အခုကတည်းက Victim blaming society ကို ပယ်ဖျက်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ် ။
သင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရရင် ဘာဖြစ်မှာလဲ ?
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို Coronavirus ဝင်ရင် ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတာကို ရှင်းလင်းတဲ့ animation နဲ့ Necleus Medical Media က အခုလိုဖော်ပြပေးထားပါတယ် ။ စိတ်ဝင်စားသူများ လေ့လာနိုင်ပါတယ် ။
သင်နဲ့သင့်ကလေးတွေကို Coronavirus ရန်ကနေဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ?
Dr.Panda Toto TIme ဆိုတဲ့ Channel က ရှင်းလင်းထားတဲ့ နားလည်လွယ်ကူတဲ့ သင်နဲ့သင့်ကလေးတွေကို COVID-19 ကနေ ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့ Video ဖြစ်ပါတယ် ။
သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ တည့်မတ်ပေးစေချင်ပါတယ် ။
Non Contact infrared Thermometer သုံးရင် လူနာ သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်းမယ့်လူရဲ့ နဖူး သို့မဟုတ် နားထင်ရဲ့3to 15 cm အကွာတိုင်းရပါတယ်
ဒါတောင် အရေပြားရဲ့ thermal sensitivity ပေါ်မူတည်ပြီး ယေဘူယျပဲ အပူချိန်မြင့်မမြင့်ပြောနိုင်တာမို့ ပုံထဲကလို အဝေးကြီးတွေကနေတိုင်းနေရင်တော့ အချိန်ကုန် လူပန်း ပြီး တိုင်းတာနဲ့မတိုင်းတာ ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ပါကြောင်း ။
Credit : မူရင်း ဓါတ်ပုံပိုင်ရှင်
ဘာလို့ Mask တပ်ခိုင်းတာလဲသိလား ?
Mask တပ်တာနည်းတဲ့ အီတလီ - ၁၃၁၅၅ သေဆုံး
လူတိုင်းကိုယ်စီ Mask တပ်တဲ့ ထိုင်ဝမ်မှာ - ၅ ယောက်သေဆုံးတဲ့
Mask တပ်တာနည်းတဲ့ စပိန် မှာ ၉၃၈၇ သေဆုံးပြီး
လူတိုင်းကိုယ်စီ Mask တပ်တဲ့ ဂျပန်မှာ - ၅၇ ယောက်သေဆုံးတဲ့
Mask တပ်တာနည်းတဲ့ အမေရိကမှာ ၅၁၁၀ သေဆုံးပြီး
လူတိုင်းကိုယ်စီ Mask တပ်တဲ့ တောင်ကိုရီးယားမှာ ၁၆၉ ယောက်သေဆုံးတဲ့
အရင်က WHO နဲ့ U.S Surgeon General ကပြောတယ် Mask တွေက COVID-19 ပျံ့နှံ့မှု တားဆီးရေးမှာ အသုံးမဝင်ပါဘူးတဲ့ ဒါကြောင့် ကိုယ့်မှာ ဖျားနာ‌ချောင်းဆိုး နဲ့အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာတွေမရှိရင် mask တွေကို လုယက်မဝယ်ကြပါနဲ့ဆိုတယ် ။
တကယ်မှန်ရဲ့လား ? လေ့လာမှုတွေအရ Mask တပ်ခြင်းကြောင့် COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးမှုကိုအောက်ပါနည်းလမ်း ၃ ချက်နဲ့လျော့ကျစေနိုင်ပါသတဲ့ ။
၁ ။ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံနေရသူတွေကြောင့် ပိုးပျံ့နှံ့ခြင်းကို နည်းစေနိုင်ခြင်း ။ Mask က virus particles တွေကို အတွင်းမှာ ပိတ်မိအောင်လုပ်တယ် ဒီ Virus particles တွေကို airborne ဖြစ်မလာအောင်ကာကွယ်ပေးစတယ် ပြီးတော့တခြားသူတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် ။
၂ ။ ရောဂါပိုးမကူးစက်ခံရသေးတဲ့သူတွေကိုလည်း new infection ရစေခြင်းကိုနည်းစေတယ် ။ အပြင်ဖက်မှာ ပျံ့နေတဲ့ airborne virus particles တွေကို ရှူသွင်းခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပြီး သင့်ကို သင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် ။
၃ ။ လက်ကနေတဆင့်မျက်နှာကိုထိတွေ့ခြင်းကို ကန့်သတ်ပေးတယ် ။ Mask တပ်ခြင်းအားဖြင့် ညစ်ပေးနေတဲ့ ပိုးကပ်နေနိုင်တဲ့ လက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အဆုတ်ထဲကို မျက်နှာကိုထိတွေ့ခြင်းမှမတဆင့်မဝင်နိုင်အောင် physical barrier အနေနဲ့ တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ် ။
Czech Republic နိုင်ငံမှာ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ကတည်းက လူထု ကို Mask ဝတ်ဖို့တိုက်တွန်းပြီး အပြင်ထွက်တာနဲ့ mask တပ်စေတယ် ။ ဒီတော့ သူတို့နိုင်ငံမှာ Confirmed Case ခုထိ ၃၅၈၉ ပဲရှိပြီး သေဆုံးသူ ၃၉ ယောက်ပဲရှိပါသေးတယ် ။ ဒိန်းမတ်လည်းအလားတူပါပဲ ။
ရောဂါကူးစက်မှုကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ထိမ်းချုပ်နေနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဟောင်ကောင်ကဘာပြောသလဲဆိုရင် " Face Masks တွေက ကျယ်ကျယ်ပျံ့ပျံ့သုံးမယ်ဆိုရင် SARS-CoV-2 ပျံ့နှံ့မှုကို နှေးစေတဲ့နေရာမှာ အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ mask တွေက လက္ခဏာမပြတဲ့ ပိုးသယ်ဆောင်သူတွေကနေတဆင့် အကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိပဲ လူကောင်းတွေဆီကူးစက်ခြင်းကို တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ် " တဲ့ ။
United States လိုနိုင်ငံမှာတောင် mask တွေပစ္စည်းပြတ်တာ အဓိကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေတယ် ။ သောကြာနေ့တုန်းက survey အရတော့ မြို့ပေါင်း ၂၁၃ မြို့ရဲ့ ၉၂%ဟာ frist responders နဲ့ medical personnel တွေအတွက်လုံလောက်တဲ့ face masks supply မရှိသေးပါဘူးလို့ဆိုတယ် ။
အချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အစိုးရအနေနဲ့ အခုကတည်းက ဒါလေးတွေလုပ်ပေးရင်ကောင်းပါမယ်
" Mask တပ်ကြပါဆိုတာထက် Mask မဖြစ်မနေတပ်ပါ " ဆိုတာမျိုး ဒီအတွက်လည်း mask တစ်ခုကို ၅၀၀ ကနေ ၁၀၀၀ ကြားပေးဝယ်နေရတဲ့ issue တွေမရှိအောင် စျေးမြင့်တာတွေမမြင့်အောင်စီစဉ်ပေးဖို့လိုပါမယ် ။
Social Distancing ကို အင်တိုက်အားတိုက်ခုကတည်းက ကြပ်မတ်လုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ် ။ ကြေငြာချက်ထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ လိုရင်းတိုရှင်း လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ၆ ပေကွာ လျောက်ပါဆိုတာမျိုး ။
အလုပ်တွေ ပိတ်ကြပါ ဆိုတာထက် အိမ်မှာနေရင်း WORK FROM HOME လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေကို ခွဲထုတ်ပြီး traffic လျော့ကျစေဖို့စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းတာမျိုး ( ဥပမာ စင်ကာပူလို )
လူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာ မသွားပါနဲ့ဆိုတာထက် လူဘယ်ယောက်ထက်ပိုစုဝေးရင် ဒါဏ်ကြေးဘယ်လောက်ဆိုတာမျိုး ။
လိုအပ်ရင် Contact ရှိနေတဲ့ Crowded city တွေကို အချိန်အပိုင်းအခြားနဲ့အသွားအလာကန့်သတ်တာမျိုး ( Community Quarantine ) ။
နိုင်ငံတော်အခြေအနေကိုအားနာပေမယ့် ဆုံးဖြတ်စရာရှိတာတွေကိုမြန်မြန်ဆုံးဖြတ်ပြီး Super Spreader တွေ Massive Spreading တွေကို အချိန်ရှိတုန်းလေး တားကြရအောင်ပါ ။
Mask တပ်တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ၅.၄.၂၀၂၀ နေ့စွဲနဲ့ MOHS က ...
သင်နဲ့သင့်ကလေးတွေကို Coronavirus ရန်ကနေဘယ်လိုကာကွယ...